भोक मेटिने गरी हेस्राले खाद्यान्न बाँडेपछि बस्तीमा छायो यस्तो खुशियाली – RealPati.com
काठमाडौं । कसैको मन कति बेला हाँस्छ ? जब उसले मनबाट चाहेको कुरा पुरा हुन्छ तब उ वास्तवमा मनबाटै प्रफूल्ल भएको पनि देखिन्छ । कोरोनाबाट भोकमरीको चपेटामा परेका यस्ता नागरिकहरुको हातमा र थाप्लोमा खाद्यान्नको बोरा थमाएपछि यस्तै खुशी छचल्किएको छ ।
झोलामा तरकारी, दाल, नुन, तेल र कोरोनाबाट बच्नको लागि सुरक्षा सामग्री थमाईएको थियो भने थाप्लोमा चामलको बोरा । जो यसरी लिएर घर जान पाउँदा निकै खुशी देखिन्थे । घर आँगनमा खाद्यान्नका बोरैबोरा राखिएको छ र गाउँका प्रत्येक परिवारलाई कोभिडबाट बच्ने उपायसहितको चेतनामूलक जानकारीसहित खाद्यान्न बितरण गरिएको छ । बृद्धबृद्धा लौरो टेकर भए पनि आएका छन् र बालबालिका पनि सँगै खाद्यान्न लिन खुशी मन गरेर आएका छन् । सरकारले भोकमरीबाट कोही मर्नु पर्दैन भनिरहेको छ तर पनि झापा, सिराहा, रौतहट, सर्लाहीका नागरिकहरु भनें कोरोनाका कारण भोकमरीबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ सरकार भाषण गर्छ र यस्ता नागरिकहरुको भोक मेटाउने कामचाहिँ विभिन्न संघसंस्थाहरुले गरिरहनुपरेको छ । हेल्पिङ हेन्ड नेपाल र स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघ (हेस्रा) नेपालले अहिले कोरोनाबाट प्रताडित ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरुको घरघरमा पुगेर यसरी खाद्यान्न र सुरक्षा सामग्री वितरण गरिरहेको छ । बिहान बेलुकी चुल्हो बाल्न समस्यामा परेका नागरिकहरुका लागि यसरी घरढोकैमा खाद्यान्न पुग्नु यो भन्दा खुशी अरु के हुन सक्छ ? भोक भन्दा ठूलो केही हुन्न भने झैं भोकले अत्तालिएका यस्ता नागरिकहरुले केहि महिना भए पनि यसो राहतको महशुस गर्न पाएकाछन् । भोकले छट्पटिएको बेला यसरी झोला र बोराभरि खाद्यान्न पाउँदा कसको पो मन नहाँस्ला र ? हो यस्तै हाँसो देखिएको छ बालबालिका, बृद्धबृद्धाहरुमासमेत ।
सिरहाका भोजराज यादबको मन पनि यति बेला निकै प्रफूल्ल देखिन्छ किनभने भोजराजको भोक पनि यही बोरासँगै मेटिने भएको छ । आफूसँगै घरमा भएका लालाबालालाई खुशी राख्न पाउँदा उनी पनि प्रफूल्ल नै देखिन्छन् । त्यसैगरी सुरीला मन्सुर, बिभिता खातुनलगायतको मन पनि यादबको भन्दा कम हाँसेको छैन । हेस्रा नेपालका कार्यकारी निर्देशक जिया खानले अनिकालमा बाँच्न यहाँको पिछडिएको वस्तीका बासिन्दाको पीडामा मलम लगाउनको लागि केही भए पनि सहयोग गरेको बताए । कोरोना र लामो लकडाउनका कारण सर्वसाधरणको घरमा चूल्हो बल्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उनले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
संस्थाले दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको घरदैलोमै खाद्यान्न र सुरक्षा सामग्री बितरण गर्दै आएको छ ।
सर्लाहीका मजहर मुसहरले ऋण खोजेर जेनतेन चाडपर्व त माने तर, अहिले काम नहुँदा त्यसै भौतारिनुपरेको छ । काम नपाएपछि बिहान बेलुका खानसमेत उनलाई समस्या परेको छ । यस्तो बेला खाद्यान्न बोकेर घर जान पाउँदाको उनको खुशी बेग्लै छ । बर्षको ६ महिना पनि ज्यालादारी गरेर हातमुख जोड्न हम्मेहम्मे पर्ने भएको भन्दै उनले आफ्ना सन्तानलाई पेटभरि खान दिन नसकेको पनि धेरै भयो । राहत स्वरुप खाद्यान्न, कपडा र कोरोना माहामारीबाट बच्नको लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री सेनीटाईजर र मास्क घर घरमा पुगेपछि उनीहरुको मन ढुक्क देखिन्छ ।
क्वारेन्टाइनमा बसेका प्युठानका एक युवकको मृत्यु
सेक्सको इन्जोइ गरिराछु, किन विवाह गर्नुपर्यो ? दिपाश्री निरौला (भिडियो)
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे राष्ट्रपतिसंग नेकपा अध्यक्षद्वयले गरे छलफल